Isku day la doonayo in lagu barto TAARIIKHDA DHAQANKA EE DHAQANKA DHAQANKA EE DHAQANKA GUUD - Qaybta 2 - Dhulka Barakaysan ee Daraasadaha Vietnam
Waana, sida lagu sharaxay, waa buugga tabaha millatari, xeeladaha dagaalka, cilmiga xiddigiska, macluumaadka juquraafiyeed, xisaabinta.
Guud ahaan, inaad noqotid hoggaamiye millatari oo caan ah, mid aan ku dhaqmin kaliya “Thap bat ban vo nghe” (Sideed iyo toban qaybood oo fanka dagaalka ah) laakiin sidoo kale bartay buugaag kale sida Hadda ka dib (Buugga istiraatiijiyadda militari), Aad baan u jeclahay (Lix waxbarid qarsoodi ah iyo seddex istiraatiijiyadeed), Binh phap Ton Tu (Xeeladaha millatari ee Sun Tzu).
Buugga tabaha militari ee Fiyatnaam waa Aad baad u mahadsan tahay (Soo-Gabagabaynta Nidaamyada Milatariga), kaas oo inta badan ka koobnaa “Summe of Strategists qarsoon” by Tran Hung Dao iyadoo lala kaashanayo Goob Khe Hau iyo Buugga dagaalka ee Đào Duy Từ Dao Duy Tu.
Waxaa lagu yiri gudaha Binh Dinh, waxaa jiray buug la yiraahdo Tay Son binh phap (Tay Son taatikada milatari) laakiin waa la waayey.
Baad tahay (Buug militari) wuxuu sheegayaa shan arrimood oo nafsi ah, oo umuuqda istiraatiijiyad millatari oo aasaasi ah, oo hogaamiyaha milatarigu u baahan yahay inuu maamusho:
- Qodobka koowaad waa isafgarad, kaas oo loo arko inuu yahay mabda'a ugu sarreeya ee xukunka waddanka iyo farshaxanka dagaalka.
- Qodobka labaad waa taatikada. Kaliya gal goobaha dagaalka markii la go'aansado xeeladaha.
- Qodobka saddexaad ayaa ah inuu hore u socdo ama gadaal u socdo. Nasiib darro lama oggola. Dilemma waa qodobka ugu waxyeelada badan dagaalada.
- Qodobka soo socdaa waa farshaxanka dagaallada bilaa derbiyo, dhufaysyo, ama dagaallo.
- Qodobka shanaad ayaa ah in hoggaamiyuhu u tixgeliyo dagaalyahannadiisa inay yihiin addimmo isaga u gaar ah halka dagaalyahannadu ay u maleeyaan hoggaamiyahooda maskaxdooda.
Waa taa (Farshaxanka dhaqanka Vietnamese) wuxuu ahaa magac faneedka dhaqanka ee Fiyatnaamiis ee loo adeegsado Dang Trong (Koonfurta Vietnam ee qarnigii 17-18naad).
Dad badan oo sayid ah oo ka mid ah farshaxanimada dagaal ee Koonfurta Vietnam (Dang Trong) u maleeyay taas Waa taa wuxuu ahaa magac adag oo loogu talagalay farshaxanka dhaqanka Vietnamese. Magaca ayaa asal ahaan ka soo jeeda boqortooyadii hore ee Nguyen Eebbe ee Dang Trong. Waqtigaas, miinooyinka militariga waxaa loo tababaray inay u diyaar garoobaan dagaalada ka dhanka ah Dang Ngoai (Waqooyiga Vietnam ee qarnigii 17-18naad).
Si kastaba ha ahaatee, cado iyo Quang Nam Waxaa loo arkaa Vo ta inuu yahay mid millatari oo casri ah, oo inta badan loo adeegsado qaabka fanka dagaalka ee Bach Ho. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah qaababka fanka dagaalyahannada cusub ayaa sidoo kale u adeegsaday magacan sida Bac Vietnam vo, Tien dheer Quyen dao (kahor 1975).
Kahor 1975, sayidyo fara badan oo farshaxaneed dagaal ayaa u maleyn jiray taas Waa taa ayaa loo fahmay sida Farshaxanka dagaalyahannada Binh Dinh. Waxaa laga yaabaa inay ahayd sababta oo ah farshaxanka dagaal ee Binh Dinh wuu fiicnaaday wuxuuna caan ku noqday qaababka kale ee fanka dagaallada. Sidaa darteed, dhammaan foomamka fanka dagaalka sida Ngoc tran ngan dai (Xaaladdan oo kale), Roi Ngu mon, Lao Mai quyen, Waa hagaag waxaa lagu kala gartay farshaxanka dagaal ee Binh Dinh.
Waxaa jirtay hees la yiraahdo “Waa hagaag"(Farsamooyinka gabay ee farshaxanka dhaqanka Vietnamese) sida soo socota:
Farshaxanka Martial waa wax aan muuqan;
Maxaad ku samayn lahayd dagaal.
Sida loo garaaco feedhkaaga, iyo sida loo tuuro?
Weerar sida duufaan oo kale.
Waa inaad garataa shanta shay.
Waxaadna ku ogaataa qalbiga birta iyo dabka.
Laad sare, laad degdeg ah, shaqo joojin - dhaqdhaqaaq beddelaad iyo degganaan lama filaan ah
Miyaad ku tababbaratay toddobada farsamo ee weerarka, saddexda farsamooyinka ee difaaca?
Xaqiiqooyinku way adag yihiin
Mowduuca Faraska Faraska iyo mawqifka hore waa inuu ahaado mid adag.
Ku celceli si joogto ah muddo saddex sano ah.
Kadib ku celceli foomamka, mar labaad iyo mar labaad.
Ha murugoonin afarta jiho.
Waa inaad xasuusataa ereyada Ngan dai ngoc tran.
Farsamooyinka weerarku waxay u eg yihiin daruuraha oo dul wareegaya samada oo dhan.
Cagtu horeba waxay ugu ordaysaa sidii xiddig toogasho ah.
Ku hagaaji qaabkaaga dagaalka aag kasta oo la bixiyo: xaddidan ama weyn - u adeegso si aad uga faa'iideysato.
Baro sida loo khiyaaneeyo, baro sida wax loo garaaco.
Noqo nin la dagaallama.
Noqo geesi guuleysta.
Ha noqon mid wax iska dhiga.
Is-hoosaysiin. Asluub ​​leh Waxaad ku dadaashaa xigmad.
Iska jir marka aad wajaho kooxaha aadka u adag.
Geesinimada iyo fanaaniinta wanaagsan ayaa ku dhashay maskaxdeena.
Ku tabobaro fanka dagaal sida ugu fiican ee aad karti u leedahay.
Difaaca naftaada, difaaca dadkaaga, difaaca nabadda - kuwani waa dadaal weligeed ah.
Tacliinta sare ee Vietnam waxay bilaabatay kumanaan sano kahor, taasoo ka deg degtay dalal badan oo hodan ku ah dhaqanka soo jireenka ah ee Bariga Aasiya sida Japan ama meel ka baxsan gobolka Aasiya-Pacific sida Mareykanka, iwm.
Aasaaska tacliinta sare ee Fiyatnaam waxaa qasab ku noqotay inay kiciso khasnadaha dhaqanka ee bariga, oo Hindiya iyo Shiinaha ay yihiin laba waddan oo wax ku biiriya.
Sidaa darteed, barnaamijyada tababbarka ee hogaaminta guud ee bulshada fekerka wakhtigaas dhammaantood waxay ka koobnaayeen hal manhaj guud, iyadoo aan loo eegeyn cidda loo adeegsaday: baratayaasha, khubarada suugaanta, ama sayidyada fanka dagaalka. Manhajku wuxuu ahaa iskudarka saddex qaybood oo waaweyn oo dhaqameed: Confucianism, Budhiism, Iyo Daoism (Taoism). Waxaa loo adeegsan jiray daqiiqad kasta, goob kasta, iyo qaab-dhismeed kasta, fasallo kasta oo ka dhaca tuulooyinka (dadka intiisa badan) ama maxkamada sare ee dacwadda (loogu talagalay ehelka emporada iyo xashiishka). Saddexda qaybood ee waaweyn ee dhaqameed ayaa lagu dabaqay si loo dhiso aasaaska fikradaha iyo dabeecadaha aadanaha ee ku saleysan qaababka Confucian. Waxaa loo isticmaali jiray in lagu tababaro xaydhyada rayidka iyo miinooyinka.Jaantus…) fikradaha Confucian.
Dadka qaar ayaa wali shaki ka qaba akhlaaq xumida adduunkan murugsan. Si kastaba ha noqotee, maalmahan, barayaal badan ayaa isku daraya xirfadaha jilicsan sida xirfadaha dabeecadda, xirfadaha isgaarsiinta, hoggaaminta, iwm., Barnaamijyada tababarka si loo baro dadka warshadaha casriga ah. Tan macnaheedu maahan in barnaamijkii tababarka ee bulshada isku-duubnida qadiimiga ahi lahayn xirfadahan. Xaydhooyinka rayidka iyo militariga labadaba waxaa waday falsafada nolosha, oo ah xirfad si kala duwan loo adeegsaday waqtiyo kala duwan - “Tien vi quan, thoi vi su"(Noqoshada macallimiin kadib markii ay joojiso in ay noqdaan wax xaddidan) ama "Waa hagaag, oo kaliya"(Noqoshada xaddiga gaagaaban ayaa ah mid gaagaaban iyada oo dad rayid ahna ay tahay waqti dheer). Waxaa laga soo qaatay falsafadaas, xaydhada madaniga ah iyo sidoo kale xaddiga mileteri ee militariga waa inay lahaadaan afar xirfadood oo lagu dabaqay akadeemiyadda Oriental: Canab, Y, Ly, So (Confucianism, Daawada, Geomancy, Astrology).
Buugaagta aasaasiga ah ee loo adeegsaday aasaas ahaan si loo tababaro xaddiga xaddiga madaniga iyo millatariga ee xilligaas waxay ahaayeen Tu thu, Runtii (Afarta buug iyo shanta sheeko). Buugaagtan ka sokow, waa inay iyaguna bartaan kuwa kale oo badan. In kasta oo loo baahan yahay in lagu daro wax-soo-saarka xasaasiyaddatimo ka badan tii birta ahayd"(Mawduuc aaminaad leh ma caabudi lahaa laba boqor), waxay sidoo kale dhiseen aasaaska falsafadooda siyaasadeed ee aasaasiga ah ee ku saleysan Confucianism, oo loo adeegsaday cabbiraadda si loo xukumo anshaxa kumanaan kun oo sano oo taariikhi ah. Ka sokow fikradaha falsafadda sida Waa sax, Ngu thuong (Sedex qaanuun oo muhiim ah iyo Shan dabeecad xumo), Tamark, Tu duc (Saddex addeecid iyo afar tayo), Konfuciyeyaasha sidoo kale bartay Yi Shiing loogu talagalay feng shui iyo aqoonta fursadaha ama sharaxida koritaanka iyo dhicitaanka ee noocyada kaladuwan ee nolosha iyo nolosha dadka. Aqoontaani waxay sidoo kale ka caawin doontaa in xaddidaadda mileteri ee milatariga ay u noqoto mid faa iido u leh bulshada markii ay ku noqdeen noloshooda rayidka! Waxaa jiray dhir dhaqameedyo sida Hai Thuong Lan Ong (magaca dhalashada Le Huu Trac) iyo Nguyen Dinh Chieu. Waxaa jiray macallin geomancer ah sida Ta Ao Waxay daryeeleen xabaalaha, iyo guryaha. Waxaa jiray macallin cilmiga xiddigiska iyo sixirbararka sida Nguyen Binh Khiem oo caan ku ahaa sida Noradamus gudaha Faransiiska. Khabiiro farshaxanimo intii lagu jiray feudalism kama duwana khubaradii suugaanta. Khubaro ku xeel dheer suugaanta Tu thu, Runtii (Afarta Buug iyo shanta Classics), ka warbixinta iyo xirfadaha waraaqaha, iwm, ee maxkamadaha maandooriyaha. Khubarada fanka dagaalka ayaa adeegsaday xirfadahooda goobaha dagaalka. Waxay ahayd inay wax ka bartaan qaansada, daanadaha, gaashaanka, seefayaasha, warmayaasha, xoqannada gogoldhaafka leh, garka, qaababka farsamada ama qaababka gaarka ah sida shaqaalaha laba-qaybood, qalimaanta birta, qalimaanta kiniiniga, iwm xoogga gudaha, ka fiirsashada, iwm.
Guud ahaan, tababbarka tababarka ayaa qayb ka ahaa Thap bat ban vo vohehe (Sideed iyo toban qaybood oo fanka dagaalka ah).
Kumanaan sano oo taariikhi ah, laga soo bilaabo dhex-dhexaad ilaa casriga iyo ta casriga ah, waxaa jiray kaliya XNUMX jeer Fiyatnaam ayaa xor ka ah dagaalladii joogtada ahaa (sida laga soo xigtay Ph.D. Qoraal ku saabsan taariikhda Vietnamese oo uu sameeyay cilmi baare reer Japan ah, oo uu soo diray Prof. Tran Quoc Vuong). Intii lagu gudajiray toddobadii maalmood ee ciidaha, muxuu boqorro Fiyatnaamiis iyo mandarins ka qabtay? Xaqiiqdiina, waxay horumariyeen asalka suugaaneed ee ay kujiraan asalka suugaanta inta lagu gudajiray Ly-Tran erey.
◊ Iskuday inaad barto TAARIIKHDA DHAQANKA EE DHAQANKA DHAQANKA EE DHAQANKA GUUD - Qaybta 3.
◊ Iskuday inaad barto TAARIIKHDA DHAQANKA EE DHAQANKA DHAQANKA EE DHAQANKA GUUD - Qaybta 1.
(Booqday jeer 1,498, booqashooyinka 2 maanta)
Views Views: 1,799
← Iskuday inaad barto TAARIIKHDA DHAQANKA EE DHAQANKA DHAQANKA EE DHAQANKA GUUD - Qaybta 1
Iskuday inaad barto TAARIIKHDA DHAQANKA EE DHAQANKA DHAQANKA EE DHAQANKA GUUD - Qaybta 3 →
Comments Off ku saabsan CHỮ NÔM ama Qoraalkii Hore ee Fiyatnaamiis iyo Ku-biiridiisii ​​Hore ee Suugaanta Fiyatnaam - Qeybta 2